China Solar Branch Isixhumi MC4 T Parallel Solar Iphaneli ifektri kanye nabaphakeli | UBUNGOZI
Ukuzithokozisa: Okokufaka okungu-3, ​​okukhiphayo okungu-1
Incazelo yesi-3 ku-1 MC4 T Isixhumi Segatsha
Izixhumi zeMC4 zegatsha zisetshenziselwa ukuxhumanisa amapaneli welanga afanayo (amamojula we-PV). Kuthengiswe ngababili, lawa ma- “Y-Connectors” azogcina amandla we-solar panel ukumisa usayizi webhethri. Lezi zixhumi zelanga ezi-1to3 zihambisana kuphela nezixhumi zeMC4 futhi ziza nesilisa esisodwa (MMMF) nesixhumi esisodwa sowesifazane (FFFM). Sebenzisa lezi zixhumi zegatsha zeMC4 ukwenza ukuxhumana okuqinile, okungangeni manzi.
Usizo lwe-MC4 1to3 PV Branch Connector
Umdwebo we-MC4 3to1 T Splitter
Langaphambilini MC4 T Isixhumi Wiring Solar Panel 2to1 ochungechungeni
Olandelayo: I-Solar Panel Cable Splitter 1 kuya ku-4 T Izixhumi Zamagatsha
3in1 pv igatsha
Isixhumi selanga esingu-3T
3to1 igatsha mc4
3to1 solar panel isixhumi
3Y ukuzivumelanisa nelanga
3Y idabula lelanga
I-5 ku-1 elanga le-Multi Contact Branch Isixhumi se ...
6 kuya ku-1 MC4 Splitter Ixhuma Amapaneli Elanga ku ...